“Waan Yara Ceebsadaa Marka Neymar Uu Ii Sheego Inuu Taageere Ii Yahay” – Lionel Messi Oo Neymar Iyo Waxyaabo kale Kaga Hadlay Wareysi Xiiso Leh Uu Bixiyay. | Haqabtire News
“Waan Yara Ceebsadaa Marka Neymar Uu Ii Sheego Inuu Taageere Ii Yahay” – Lionel Messi Oo Neymar Iyo Waxyaabo kale Kaga Hadlay Wareysi Xiiso Leh Uu Bixiyay.
Leo Messi oo 29 sanno jirsaday shalayto ayaa wareysi lala yeesahy waxaa la soo dhigay bogga qaaska uu u leeyahay saaxiibkiisa kooxda Barcelona Neymar. Waxaana uu kaga hadlay waxyaabo badan oo si gaar ah u quseeya xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo xiddiga reer Brazil.
Isagoo ka hadlayay haddii uu garanayay Neymar ka hor inta uusan Barcelona u saxiixin, Leo ayaa ku jawaabay: “Waan garanayay markii uu joogay Santos. Waxaan garanayay aabihiis oo aan ku kulanay kulankii tabarucaada ee Deco. Dhanka kubada marka laga hadlayo waan ka warqabay waxa uu Neymar ka sameynayay Brazil iyo Copa Libertadores.”
Waxaa sidoo kale la weydiiyay xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo Neymar iyo Suarez iyo sida uu ku dhacay: “Waa wax si dabiici ah u dhacay, ma aheyn xiriir aan anaga baadigoobnay. Waa wax aad u dabiici ah waa wax dhab ah. Waxaan bilownay inaan si wacan isku fahamno garoonka banaankiisa taasoo sahashay in garoonka dhexdiisa ay wax walba fududaadaan. Waxaa sidoo kale macquul ah inay wax walba fududeysay xaqiiqda ah inaan South America ka soo jeedno oo waxyaabo isku mid ah aan ku nooleyn taasoo isku kaaya keentay.”
Messi ayaa qirtay in Neymar uu weli u arko isaga xiddig uu ku daydo, taasna uu yara ceebsado: “Waxa uu mar walba yiraahdaa inuu yahay taageeraheyga, taasna waan yara ceebsadaa, sababtoo ah wajigeyga hortiisa ayuu ku yiraahdaa waxaan ahay taageere kugu waalan.
“Xitaa markii uu yimid, waxaan ogaaday inay dhab ka tahay. Waa sida uu dareemayo, waxaana ay iga dhigeysaa mid aad u faraxsan in wiil isaga oo kale ah inuu waxyaabahaas iga yiraahdo, waxaana sii yeelan karnaa xiriir aad u fiican ilaa iyo maanta.”
Waxaa la weydiiyay inuu ka hadlo mustaqbalkiisa, Messi ayaa yiri: “Kama fekero mustaqbalkeyga. Ma jiraan wax aan qorsheeyay haatan, waxaan diirada saarayaa waqtigaan la joogo. Inaan kubada ciyaaro waa wax aan jeclahay inaan sameeyay, marka waqtigeeda yimaado ayaan arki doonaa wax aan sameyn doono. Waqti xaadirkaan feker xitaa kama heysto.
Wareysiga ayaana ku soo dhamaaday sa’uulo gaagaaban:
Haddii aadan noqon laheyn ciyaaryahan, waxaad noqon laheyd?
“Ma aqaano. Wax feker ah kama heysto. Tan iyo markii aan yaraa waxaan ku riyoon jiray ciyaarista kubada cagta, wax kalena kama fekeri jirin.”
Maradona mise Messi?
(Wuu qoslay) “Maradona”
World Cup mise Ballon d’Or?
Neymar boos maka helayaa xulka Argentina?
“Koox walba ayuu ka helayaa boos, Neymar waxa uu boos ka heli karaa meeshii uu doono. Ciyaaryahan qariib u ah sida isagoo kale wuxuu ka ciyaari karaa meeshii uu doono.”
Goolkee ayaad u aragtaa goolkaagii kuugu fiicnaa?
“Waxaan mar walba sheegee in muhiimada gool inay iigala qaalisan tahay quruxda gool, sidaasi darteed goolkeygii iigu fiicnaa waa goolkii ugu horeysay aan ka dhaliyay final Champions League kubadii madaxa aheyd ee aan 2009 ka dhaliyay Manchester United, madaama ay muhimad weyn laheyd”
Neymar Jr mise Ronaldinho?
(Qosol badan) “Ohhhh! Waa kala doorasho aad u adag! Waan ku faraxsanahay inaan labada nin la soo ciyaaray. Nasiib ayaana u lahaa inaan la soo ciyaaray sidaasi darteed waa ay adag tahay inaan mid doorto.”